Budata Tiny Sea Adventure APK maka Android
Budata Tiny Sea Adventure
Budata Tiny Sea Adventure,
Tiny Sea Adventure bụ egwuregwu njem nlegharị anya nokpuru mmiri nke na-adọta ndị egwuregwu nọ nafọ ndụ niile site na iji anya ya mara mma yana egwuregwu dị mfe. Na egwuregwu ebe anyị na-achọpụta ụwa anwansi nke dị nokpuru mmiri site na ịbanye nime omimi nke oké osimiri nenweghị ihe kpatara ya na ịghara ịrapagidesi ike na ihe ndị e kere eke na-ebi nokpuru mmiri, anyị na-ezute ọtụtụ ihe e kere eke ka anyị na-aga nihu.
Nime egwuregwu ahụ, nke anyị na-aga nihu site nịgbanarị azụ azụ, jellyfish, shark na ọtụtụ azụ ndị ọzọ, anyị agaghị emetụ azụ ahụ aka ogologo oge o kwere mee na ụgbọ mmiri anyị. Anyị na-egwu ihe omume ahụ site na ọkọ mgbe azụ na-achụ anyị, na-eche na anyị na-etinye aka na ndụ ha, metụ ụgbọ mmiri anyị aka. Ka azụ anyị na-agbapụ noge a na-achụ, ka anyị na-enwetakwu isi.
Iji duo ụgbọ mmiri anyị, anyị na-eji analog etinyere na etiti ala ihuenyo. Ọ bụ egwuregwu a na-eji otu mkpịsị aka egwuri nụzọ dị mfe, ma ka ọnụ ọgụgụ azụ̀ na-abawanye, njikwa ụgbọ mmiri na-esiwanye ike karị.
Tiny Sea Adventure Ụdịdị